Macalin wax ka dhiga Jaamacadda SIMAD oo lagu dhaawacay qarax lagu xiray gaarigiisa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Waxaa saaka gaari uu watay lagu qarxiyey Macalin wax ka dhiga Jaamacadda SIMAD ee magaalada Muqdisho iyo jaamcado kale.
Wararka ayaa sheegaya in qaraxu ahaa mid lagu soo rakibay gaariga macallinka, waxaana macallinka oo magaciisa lagu sheegay C/xaliim Axmed Nuur gaary dhaawac culus.
Qaraxa ayaa haleeyay gaariga isagoo marayey wadada Taleex ee degmada Hodon ee Magaalada Muqdisho, waxaana wararka qaar sheegayaan in macallinkaas lug ka go’day.
Taliyaha Booliisak degmada Hodon, Maxamed Daahir oo warbaahinta kula hadlay goobta gaarigu ku qarxay ayaa ku eedeyey falkaas dad uu ugu yeeray Nabad-diid.
Qaraxa ayaa ahaa mid lagu xiray gaari nooca yar yar ah oo uu saarnaa mid ka mid ah Shaqaalaha shirkad duulimaad oo lagu magacaabo Dhayman, taas oo magaalada Muqdisho ka howlgasha.
Waa qaraxii labaad ee gaari lagu xoo xiro oo muddo todobaad ah ka dhacay xaafadda Taleex ee degmada Hodon, iyadoo 2-dii bishaan Janaayo qarax lagu dilay mid ka mid ah Shaqaalaha shirkad duulimaad oo lagu magacaabo Dhayman, taas oo magaalada Muqdisho ka howlgasha.
10-kii bishii December ayay aheyd markii kooxo hubaysan oo watay gaari yar ay magaalada Muqdisho ku dileen gudoomiye ku xigeenka Jaamacadda SIMAD ee Arimaha Waxbarashada, Ibrahim Maxamuud Xaamud.